विर्सने बानी छ ? नछुटाउनुस् यी ६ खानेकुरा – Online BBC
विर्सने बानी छ ? नछुटाउनुस् यी ६ खानेकुरा
March 9, 2018 by OnlineBBC
तुलसी-मसलाको रुपमा तुलसीका पातको प्रयोग निकै लाभदायक हुन्छ । छिटो भुल्ने समस्या भएका मानिसले दिनको २/३ तुलसीको पात खाँदा त्यसले फाइदा गर्छ ।काठमाडौं- के तपाईंलाई विर्सने समस्याले सताएको छ । बढी भूल्ने र विर्सने समस्या छ । छ भने तपाईको खान्कीमा पौस्टिक तत्वको अभाव रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
Prevफोरमपछि राजपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी, ठाकुरलाई उपराष्ट्रपतिको ‘अफर’
Nextचुपचाप सत्ता आफूमा केन्द्रित गराए:सी चिनफिङ